इस्लाम स्वीडेन मा लिन चाहन्छ | Apg29
त्यहाँ मसीहीधर्म र इस्लाम बीच हाम्रो देश क
हाम्रो देश टाढा घृणा र हिंसा बाट मसीही मार्ग रोजेको छ त्यहाँ हाल को वर्ष मा धेरै मुस्लिम छन्। जबकि Islamist खतरा बढ्ने, कुरा को सकारात्मक पक्ष हो।
एकीकरण - एक प्रमुख मुद्दा
प्रमुख राजनीतिज्ञ अब एकीकरण बारे मा कुरा गर्दै एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो। स्पष्ट यसलाई शायद भन्नुभयो गर्न सकिन्छ।
प्रस्ट छ, यसलाई हल्कासित एक महत्वपूर्ण मुद्दा लिन त स्मार्ट छैन। यो गम्भीर कुरा बारे हामी के गर्न सक्छौं? यस दुःखी जवाफ "धेरै छैन" वा "लगभग केही" छ।
यो निराशावाद कारण एक वैज्ञानिक, प्रोफेसर Ruud Koopman निष्कर्षमा के छ। उहाँले युरोप मा मुस्लिम बीच एकीकरण र Assimilation अनुसन्धान 20 वर्ष छ।
नार्वेजियन अखबार मा कागजात उहाँले साथ आए के पढ्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो निष्कर्ष छ: इस्लाम लोकतन्त्र र पश्चिमी समाजमा संग मिलाप छैन दिन्छ। यसलाई पश्चिमी समाजमा मा आप्रवासी अन्य समूह भन्दा मुस्लिम एकीकृत गर्न कठिन पक्कै छ।
पहिले नै 2013 मा Koopman प्रकाशित सर्वेक्षण सँगैको एउटा रिपोर्ट ती सर्वेक्षण मुस्लिम दुई-तिहाई धार्मिक नियमहरू तिनीहरू बस्ने देश को कानून भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने विश्वास गर्छन् भनेर देखाउँछ।
कुनै पश्चिमी समाज मुस्लिम एकीकृत मा सफल भएको छ। यसरी, यो स्वीडेन कुनै अन्य देशमा के सफल भएको छ हासिल भनेर एक भ्रम छ।
यो एक अलग संस्कृति, धर्म, र एक मानसिकता स्वीडिश समाज संग संघर्ष बारेमा छ किनभने यो छ।
एक समाधान तथापि, छ, र मुस्लिम मसीही विश्वास गर्न रूपान्तरण हुनेछ जब कि छ। यो चरण लिएको भएकाहरूलाई उदाहरण धेरै छन्, उत्कृष्ट समाज मा एकीकृत गर्न व्यवस्थित छन्।
एकीकृत चाहनुहुन्छ नगर्ने ती - - रहने यस बावजुद, जबकि ठूलो संख्या, यी मसीही रूपान्तरण धेरै धपाउने गर्न अझै माइग्रेसन बोर्ड चयन गर्नुहोस्। यो एक विनाशकारी गल्ती साबित गर्न सक्छ!
तपाईं शीर्षक गर्न प्रतिक्रिया भने त्यसैले यो लेख पढ्न र हाम्रो देशमा भइरहेको छ के को उदाहरण हेर्नुहोस्।
Soheila Fors एक नाटकीय FL utet छ, त्यो इरान जन्म र स्वीडेन पछि आए थियो। आज त्यो एक स्थिर मसीही छ र मसीही विश्वास दुवै इस्लाम को अनुभव छ। आज विश्व मा एक लेखमा उनले घटना बारेमा हामीलाई यसो भन्छ:
"यो जब म ककस थियो र त्यो मलाई को सामना गर्नु गर्न आएका वर्ग मा भयो। यो पर्दा पनि नफरत मुस्कान जस्तै पूर्ण बसिरहेका थिए। त्यसैले थियो कि एक सुनुवाइ बिना कुराकानी गर्न कुराकानीमा थाले। त्यो प्राप्त छैन जब कहीं, यो खतरामा समय थियो: हामी लिन यहाँ आएका छन्। कुनै एक स्वीडिश सिक्न हुनुपर्छ, सबैलाई अरबी बोल्न गर्नुपर्छ। हामी शक्ति हुँदा पनि पर्दा लगाउने बाध्य हुनेछन्।
कल मेरो मुखमा खराब स्वाद दिए म उसलाई यति धेरै पटक जस्तै धेरै भेटेको छु किनभने। यो 2020 का स्वीडेन मा 1980 को दशक मा दुवै इरान सधैं नै स्वस्थ कि धार्मिक तानाशाही गाई छ। "
Hjällbo, Gothenburg एक छेउछाउको देखि, हामी स्वीडेन एक फरक तस्वीर दिन अर्थात् हुनेछ। आज विश्व तीन मसीहीहरूले वर्ग मा evangelized गर्दा के भयो को तस्वीर दिन्छ।
त्यसपछि त्यहाँ गिरोह देखि एक मान्छे थियो र यसो भन्छन्: "। तपाईं यहाँ तपाईंले लिन तीन मिनेट छ, वा म तपाईंलाई गोली छौँ"
घटनाको रमजान समयमा भयो र गिरोह पनि "सबै छिटो यहाँ व्यक्त गरे। हामी मुस्लिम छन्। हामी तपाईंलाई यहाँ चाहँदैनन्। "
निम्न टिप्पणीहरू मुस्लिम शब्द uttered थिए: "। हामी तपाईंलाई यहाँ चाहँदैनन्" र "हामी लिन यहाँ आएका छन्"
यो त्यहाँ मसीहीधर्म र इस्लाम बीच हाम्रो देश को लागि एक आध्यात्मिक युद्धमा छ भनेर देखाउँछ। यसलाई अब उठ र गम्भीर यी घटनाहरू लिन मसीहीहरू र राजनीतिज्ञ लागि उच्च समय छ।
को Islamists स्वीडेन मा वृद्धि गर्दै
कुनै एक स्वीडेन संसारको संरक्षित कुना Islamists को प्रभाव हो भनेर विचार गर्नुपर्छ। एक Sapo रिपोर्ट स्वीडेन मा Islamists को तेज वृद्धि देखाउँछ।
टिभी, teletext र धेरै अन्य मिडियामा स्वीडेन मा Islamists संख्या मा एफबीआई गरेको भयावह तथ्याङ्कले भाग लिन जुन 11 हुन सक्छ।
Fredrik Hallström, को आतंकवाद प्रतिरोधी को उप प्रधान भन्छन्: "हामीले वृद्धि चिन्तित छन्।" यो पनि रिपोर्टमा भने: "अख्तियार अब आक्रामक मा स्वीडेन मा कट्टरपंथी Islamists संख्या जोडिएको छ हाल को वर्ष मा जोडले वृद्धि, सयौं देखि जाँदै छ हजारौं। मई मा, पहिले नै छ प्रमुख Islamists detained गरिएको छ छ। "
स्वीडेन मा हजारौं त्यहाँ अहिले (!) Islamists। यी मध्ये एक हाम्रो देश को सुरक्षा गर्न एक संभावित खतरा गठन भन्नुभयो गर्न सकिन्छ। यो शायद समय मात्र कुरा हामी कट्टरपंथी Islamists कुनै पनि तरिकामा कदम चाल्न देख्न सुरु गर्नु अघि छ।
त्यहाँ हाल को वर्ष मा स्वीडेन मा मुस्लिम को संख्या मा एक तेज वृद्धि भएको छ।
यो को जागा मा पनि इस्लामी मा एक तेज वृद्धि निम्नानुसार। को Islamists अरु मार्न हावा मा उड्ने सहित आफ्नो धार्मिक विश्वास, को नाम मा केहि गर्न इच्छुक छन्।
जुन मा, मस्जिदों मा सक्रिय रहेको छ कसले दुई imams (!), धपाउने गर्न सुरक्षा सेवा। कट्टरपंथी Islamist वातावरण को अन्य सदस्यहरु पनि सुरक्षा सेवा द्वारा detained गरिएको छ।
साधारण मुसलमान हामी प्रेम र येशूको लागि जीत प्रयास गर्नुपर्छ। येशूको प्रेम सट्टा Islamists बन्ने येशूको मायालु अनुयायीहरूलाई एक मुसलमान बनाउँछ।
तपाईं यो पढ्दै हुनुहुन्छ भने मुसलमान छन् के तपाईं परमेश्वरले तपाईंलाई प्रेम थाह हुँदैन। त्यसैले त धेरै अन्य जस्तै गर्न र प्रेमको सन्देश खोल्न।
Apg29 भन्दा अन्य गरेको छन् लेख र भिडियो आफ्नै राय प्रतिनिधित्व गर्छ।